Sakafo nentim-paharazana any Espana | Vaovao momba ny dia
Sakafo nentim-paharazana avy any Espana
Maria | | Estonia, gastronomy
Ny sakafo nentim-paharazana any Espana dia malalaka, miovaova ary tena matsiro. Izy io dia miompana indrindra amin'ny fandraisana anjara avy amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena sy ireo akora tsara faran'izay tsara izay nambolena teo an-toerana. Manomboka amin'ny tapas maoderina malaza ka hatramin'ny akoho nentim-paharazana sy lovia nandrahoina, ny sakafo Espaniola dia manandrana manararaotra ny vokatra farany tsara eto an-toerana.
Raha ny gastrisianina italiana na frantsay no ivon'ny fiheverana nandritra ny taona maro, ny Espaniôla kosa dia nijanona teo ambadika tany, miandry ny fotoana hahitan'ny besim-pirenena azy. Ny kintana Michelin izay azon'ny chef Espaniôla tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mampiseho fiovan'ny fironana ary mihamaro ny olona liana amin'ny fahitana ny tsiambaratelon'ny sakafo Espaniola nentim-paharazana. Raha iray amin'izy ireo ianao dia manasa anao hiaraka aminay amin'ity fitsangatsanganana gastronomika any amin'ny zoro rehetra eto amin'ity firenena ity izay hohanina eto..
1 Akora sakafo nentim-paharazana avy any Espana
2 Lovia 10 ambony amin'ny sakafo nentim-paharazana Espaniôla
2.2 Tortilla Espaniola
2.3 Ny paella
2.4 Lasopy Madrid
2.5 Voanjo asurianina
2.6 Kisoa minono
2.8 Ny horita ao feira
2.9 Rambon'ny omby
Akora sakafo nentim-paharazana avy any Espana
Satria i Espana dia samy manana faritra ara-jeografika samy hafa amin'ny toetrandro samy hafa, ny nahandro isam-paritra sy ny akora ao aminy dia samy hafa. Na izany aza, ireto manaraka ireto no be mpampiasa sy ankasitrahan'ny Espaniôla:
Hama Iberianina: io no vokatra ekena sy sarobidy indrindra anatiny sy ivelan'ny sisintaninay. Izy io dia azo avy amin'ny hena sitrana kisoa Iberiana. Ny pata negra dia tsy miresaka afa-tsy ny ham-bera akono 100%, izay heverina ho manana kalitao avo indrindra.
Menaka oliva fanampiny: io no singa ilaina amin'ny sakafo nentin-drazana Espana. Ity volamena misy ranoka ity dia tsy tokony hanjavona any an-dakozia Espaniola.
safrona: Ny safrona dia mitambatra tsara amin'ny sakamalao, voasarimakirana, tongolo lay, thyme ary voatabia.
Paprika: Ity zava-manitra misy tsiro mahery ity dia iray amin'ireo foto-tsakafon'ny sakafo Espaniola ary be mpampiasa amin'ny fanomanana saosisy, sobraasasas ary chorizo. Ny fampiasana azy dia lakilen'ny fankafizana horita galisiana matsiro, amin'ny patatas bravas na fanomanana akanjo tonta misy ambin-tsakafo avy amin'ny laoka. Matetika ihany koa ny manampy kely amin'ny stews hanome azy ireo loko, tsiro ary zava-manitra fanampiny.
Ny divay: singa iray hafa ilaina amin'ny lakozia. Ny tanimboaloboka dia maniry ao amin'ireo Vondrom-piarahamonina mahaleo tena 17 misy ny firenena. Ny fahasamihafana ara-toetrandro sy ny karazan-tany dia mahatonga an'i Espana ho toerana manankarena amin'ny famokarana divay tena hafa. Ny sasany amin'ireo faritra divay fantatry ny sehatra iraisampirenena dia Rioja, Ribera del Duero, Marco de Jerez, Rías Baixas, Penedés ary Priorat.
Ny fromazy: any Espana dia misy fromazy omby, ondry na osy isan-karazany, vita amin'ny fresh ka hatramin'ny sitrana, arovan'ny Protected Designations of Origin. Raha atotaly dia misy fromazy 26 miaraka amin'ny DO izay isan'ny miavaka indrindra amin'ny fromazy Cabrales, ny fromazy Idiazábal, ny fromazy Mahón-Menorca, ny fromazy Manchego, ny fromazy Murcia, ny fromazy Tetilla na ny fromazy Torta del Casar, ankoatry ny maro hafa.
hazan-dranomasina: ny hazan-dranomasina tsara indrindra any Eropa dia tratra eny amin'ny morontsiraka manamorona ny Saikinosy Iberia. Ny udkara, ny crayfish, ny haran-dranomasina, ny baranjely ... na atono, na amin'ny manta any Espana aza, dia lanin'izy ireo manokana mandritra ny fety toy ny Krismasy na Taom-baovao, fa mandritra ny ankamaroan'ny taona ihany koa.
Ny citrus: Nranjas, mandarins, voasarimakirana ... i Espana no mpitondra eran-tany amin'ny fanondranana voankazo voasary ary mpiorina fototra amin'ny sakafo nentin-drazana Espana. Mety indrindra amin'ny tsindrin-tsakafo, izy ireo koa dia ampiasaina hanamboarana ranom-boankazo, amin'ny cocktails sy fandrahoana, na amin'ny salady na amin'ny fomba fahandro mamy sy mamy.
Ireo hena: Ny henan'omby, zanak'ondry ary henan-kisoa no karazany telo fahita indrindra amin'ny sakafo Espaniola nentim-paharazana ary azo henaina, asiana saosy, na hatsatsika arina mahamay. Ny akoho koa dia be mpitia ary omanina nendasina, natsatsika ary natsatsika.
Legume: Ny tsaramaso sy zana-borona dia mpiorina fototra amin'ny sakafo peninsular nandritra ny taonjato maro ary ny roa amin'ireo lovia malaza indrindra dia ny Madrid stew sy Asturian fabada.
Zavamaniry sy zava-manitra: tongolo gasy, tongolo ary anana toy ny oregano, rosemary ary thyme no ampiasaina.
Lovia 10 ambony amin'ny sakafo nentim-paharazana Espaniôla
Ny gazpacho Andalosiana no lovia takin'ny olona mitsidika ny firenentsika amin'ny fahavaratra. Ity lasopy mangatsiaka ity dia zava-tsarobidin'ny gastronomika ho antsika, ho an'ny kalitaon'ny voatabia sy sakay ary ho an'ny menaka oliva.
Izy io dia iray amin'ireo lovia ankafizinay indrindra izay mahandro manerana ny firenena amin'ny endriny maro: curd bebe kokoa na kely na misy tongolo ... Na dia mbola tsy azo antoka aza ny fiaviany ankehitriny, dia marina ny teôria fa ny fomba fahandro dia teraka tany Extremadura nandritra ny taonjato faha-XNUMX ary niteraka lovia iray eran'izao tontolo izao ary sarobidy amin'izay rehetra manandrana azy.
Ny paella valencien dia angamba ny lovia be solontena indrindra amin'ny sakafo nentim-paharazana Espaniôla manerantany. Masaka any an-trano maro izy io amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny fialantsasatra lehibe. Izy io dia lovia vary vita amin'ny hena, safrona, legioma ary legioma izay masaka amin'ny ron-kena mandra-paha-maina.
Izy io dia amboarina vita amin'ny akoho sy legioma ary hena isan-karazany tena mampiavaka an'i Madrid izay matetika nohanina amin'ny ririnina. Ny fomba mahazatra anompoana azy dia amin'ny serivisy telo fantatra amin'ny hoe fanariam-pako: ny serivisy voalohany dia ny ron-kena, ny faharoa ny felam-bary miaraka amin'ny legioma sy ovy ary ny fahatelo misy ireo hena. Izy io dia lovia matanjaka izay manasa anao hatory rehefa avy eo.
Io no lovia eran'izao rehetra izao an'ny nahandro Asturian ary iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny gastrolojia Espaniola. Ny tsaramaso no singa fototra ary miaraka amina compango (chorizo, saosisy ra ary bacon) malaza. Izy io dia lovia matanjaka be ary aroso amin'ny takelaka tsirairay na amin'ny casseroles. Ny cider tsara na divay tsara no famenon'ity sakafo nentin-drazana ity.
Izy io dia iray amin'ireo asado nentim-paharazana sy malaza indrindra any Castilla, indrindra any Segovia sy Ávila. Izy io dia mampiavaka azy amin'ny fampifangaroana ny volon-koditra mangatsiaka sy voatsatsika amin'ny hoditry ny kisoa minono miaraka amin'ny hena matsiro, izay mahafinaritra ny fisakafoanana rehetra. Any Espana dia mahazatra ny mandray azy amin'ny Noely.
Ity lovia fihinana nentim-paharazana Espaniôla ity dia azo ankafizina amin'ny alàlan'ny aperitifa, amin'ny lovia lehibe na amin'ny lovia hafa. Izy io dia ampahany amin'ny koba nendasina miorina amin'ny bechamel sy sombin-kena, akoho na trondro mifono atody sy mofomamy. Ny mpahandro maoderina indrindra koa dia manamboatra azy ireo amin'ny fromazy, udd, masirasira, epinara misy voaloboka, sns.
Ny horita ao feira
Izy io dia iray amin'ireo lovia mahazatra an'ny gastronomia galisiana. Aroso mafana miaraka amin'ny ovy, sira madity, paprika voafafy izay mety ho mamy na masiaka ary hosorana menaka kely amin'ny lovia hazo. Ny fiarahana tsara indrindra dia vera misy divay tsara.
Izy io dia amboaram-boankazo na omby mampiavaka ny nahandro Cordovan izay efa iray amin'ireo lovia malaza indrindra nandritra an'i Roma Fahiny. Ity hena matsiro ity dia miaraka amin'ny tongolo, divay mena, voatabia nendasina na zava-manitra toy ny dipoavatra mainty, paprika mamy ary jirofo.
Ity fomba fahandro ity dia iray amin'ireo firavaka amin'ny gastronomie Basque. Ity trondro ity dia miaraka amina emulion-tongolo lay, menaka ary sakay izay manome ny cod al pil pil matsiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Sakafo nentim-paharazana avy any Espana